By Osman Mahmoud.
XAFIISKA MURASHAXA DAWLAD EE GOBALEEDKA
Arrimaha Soo cusboonaadey ee Shirka Garoowe
Waxaa dhawaantan soo cusboonaadey arrima xaasaasi ah oo laysku mari waayey, waxaana loo aaneynayaa ergada Sool oo ku heshiin weydey qaabka ergada masilideeda, oo dhawaqa xoogiisa uu ka yimid labada murashax Goonle iyo Faarax Warsame.
Maalintii toraad aheyd ayaa waxaa arrimahan ka fariistey sagaal Isim, waxayna soo saareen in ergada 17ka ee laysku haysto dib loo hakiyo oo kolka hore shirka la furo, deetana meeshaa laga anba qaado nidaam mira dhaliya. Waxaa in muda ah dabadeed ka soo if baxay go’’aankii Isimada sagaalka ahaa mid ka duwan oo ay soo saareen Isimada Sool, oo so jeediyey in 17 hor leh lagu daro, si hawsha is qabadka ergooyinka loo idleeyo, waase laysku mari waayey, oo waxaa loo fadhiyaa nidaam midkaa ka qurxoon.
Waxaa maanta ka muuqda bulshada ku dhaqan Garoowe warar aad u xiisa galiyey oo ka duwan kii dhawaantan laysku mari waayey, waxaana la filayaa in si deg deg ah loo furo.
Waxaa dhawaantan loo fadhiyey magaalada Boosaaso shirar aan kala go’’ laheyn oo lagu baadi goobayo sidii xal loogu heli lahaa, dhibaatooyinka ku soo fool leh ee abaaraha iyo xaalufka ee degaanka Bari. Waxaa shirarkaa ka soo qeyb galay xafiiska Murashaxa Jaamac Cali Jaamac, hay’’ado caalami ah iyo maamulka BARI oo uu hogaaminayey gudoomiyaha Gobalka Bari mudane: Yaasiin Cumar Dheere, mudahanuhu waxaa la dhageystey warbixinadiisii iyo safaridii uu ku soo kala bixiyey degaanada ay dhibaatada saameysay, waxaana halkaa ka furmay dooda balaaran iyo gargaar deg deg in lala soo gaaro. Waxaa gudoomiyaha xafiiska ka soo baxay qoraalo iyo codsiyo, waxaana xafiiska Murashaxa soo gaaray cabashadaa wadaninimo. Xafiiska Murashaxa Jaamac, waxa ay sheegeen in ay hawl gal balaaran ka galayaan sidii ay u taban taabin lahaa dhulkeena hooyo, waxaana jecel nahay bay yiraahdeen in aanu idiin soo gudbino cabashooyinka kale ee naga soo gaaray saaka degaanada Sanaag iyo Sool.
Waxaan xusuusin naga mudan in aan si deg deg ah idiin kugu soo sheegi doono E-mailka iyo taleefanka Gudoomiyaha Gobalka Bari oo jecel in uu idiin sheego baahida shacabka Puntland, khaas ahaan Gobalka Bari oo abaaro looga cabsi qabo.
Maantey oo Salaasa ah 23ka Oktoobar, waxaa xafiiska Murashaxa uu cadeeyey in guusha bisha Oktoobar ee Murashax Jaamac Cali Jaamac ay aad u korodhay, uuna rajeynayo guul balaaran in uu ka soo hoyo loolanka jagada madaxweynanimada ee Puntland.
Waxaan halkaan ku soo lifaaqay warqad dheer uu Sii-hayaha xilka madaxweynanimada Puntland, Dr. Yuusuf Xaaji Nuur uu u dirayo hay’’adaha daneynaya in ay ogaadaan xogta Puntland ee qaabka xawilaada iyo hufnaanta suuban iyo khidmiga wanaagsan ay ka helaan dadweynaha Puntland hay’’adaha iyo bangiyada la eedeeyey.
Waxaa uu Sii-hayaha uu u sheegay aduun weynaha in ay u dheg yeeshaan dhawaqa dadka dulman ee reer Puntland, oo aaney ku eedeyn qaaruun aaney shaqo ku laheyn iyo xulafooyin xisbiyeed oo aan Puntland ka jirin, kuwa wadanka u dhashay oo iska hadaaqayana oo ku sheegay in Puntalnd tahay xarun Itixaad iyo Usuuliyiin, waxaan oranayenaa waa waxba kama jiraan, waana ka dacwooneynaa xag madniyad iyo xag sharciba.
Sidaa iyo iska warqab wacan